ထိရောက်မှု - သူသည် musanews ကိုမချစ်နိုင်သောအခါ
martedì၊ Gennaio 18၊ 2022
ချစ်ခြင်း မုန်းခြင်း တစ်ချိန်တည်းတွင် မလိုလားအပ်သော ခံစားချက်များ
Jamie Lynn Spears : "ကျွန်တော် Britney နဲ့ ဘာကြောင့် ဝေးနေရလဲ မသိဘူး...
Adrenaline သည် အင်ဂျင်၏လောင်စာဖြစ်သည်။
ပင်မစာမျက်နှာ ပထမ ဦး ဆုံးသတင်း Man Man အကျိုးသက်ရောက်မှု - သူမချစ်နိုင်တဲ့အခါ
အဲလစ် Rosati အားဖြင့်
တည်မြဲသောဆက်ဆံရေးရှိသော်ငြားသူမကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့သကဲ့သို့သူမကိုတစ်ခါမျှမချစ်သောယောက်ျားနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်မည်မျှစိတ်ပျက်စရာကောင်းသည်ကိုသိသည်။ သူတို့သည်ထိရောက်မှုမရှိသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များဖြစ်သည်။ စုံတွဲတစ်တွဲ၏ရောဂါဗေဒစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အတူဆက်ဆံရေးကိုတွေ့ကြုံခံစားသောသူ, အကာအကွယ်အတားအဆီးတွေကိုတည်ဆောက်နှင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုကမ္ဘာကြီးကိုအအေးပြသသူကိုလုံးဝဆင်ခြင်တုံတရားကလူ။ ၎င်းတို့သည်ဘဝနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်တင်းကျပ်သောချဉ်းကပ်မှုရှိသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုအာရုံစိုက်မည့်အစား၊ အလုပ်နှင့်ပစ္စည်းပစ္စယအားလုံးနီးပါးကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြသည်။
မီလန်ရှိ Santagostino Medical Center မှစိတ်ရောဂါပညာရှင်နှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဒါရိုက်တာ Michele Cucchi ၏အဆိုအရထိရောက်မှုမရှိသောအမျိုးသားများသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုခံစားမှုနှင့်ပြသရန်လုံးဝမတတ်စွမ်းနိုင်သော်လည်းစိတ်ပျက်စရာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ " အမျိုးသမီးများသည်နားမထောင်၊ နားမလည်၊ နားလည်မှုနည်းစေသည့်နည်းဖြင့်ချစ်ကြပြီးမနာလိုမှုများနှင့်ရန်လိုမှုများဖြစ်လာကြသည်။
သို့သျောလညျးကြှနျုပျတို့သညျဆငျးရဲဒုက်ခကိုကွောကျရှံ့ခွငျးသို့မဟုတျအတိတ်ကာလတှငျခံစားခဲ့ရသောစိတ်ဒဏ်ရာ၏အကြောင်းရင်းများကြောင့်လူများကိုထိရောက်စွာချဉ်းကပ်မှုမရှိခြင်းနှင့်အတူသွားရန်အခက်အခဲကိုမရောထွေးသင့်ပါ။ ဤကိစ္စတွင်အကြောင်းပြချက်များစွာရှိနိုင်သည်။ အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာလူတစ် ဦး သည်အခြားလိုအပ်ရာများကိုမဟုတ်ဘဲမိမိ၏လိုအပ်ချက်များကိုသာအာရုံစိုက်သောမူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လွှတ်ခြင်းအကြောင်းအရင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အလွန်မြင့်မားသောမျှော်လင့်ချက်များနှင့်ယနေ့လူတို့၏ဘဝကိုပျံ့နှံ့စေသည့်စိတ်ပြင်းထန်ခြင်း။ ဇနီးမောင်နှံအတွင်းတွင်သာလွန်မြင့်မြတ်ခြင်းသဘောသည်မိန်းမကိုလက်အောက်ငယ်သားများနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုနည်းပါးစွာဆက်ဆံခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဤသို့သောဆက်နွယ်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန် (သို့) ထွက်ခွာရန်အခက်အခဲရှိလျှင်ထိရောက်မှုမရှိသောလူသည်လုံးဝမကုသနိုင်သောအရာမဟုတ်ပါ။ သို့သော်သူသည်စိတ်ခံစားမှုအထီးကျန်မှုကိုစိတ်ပျက်။ မိမိကိုယ်ကိုမေးခွန်းထုတ်ပါကပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည် - Cucchi - ဤကိစ္စတွင်သာလျှင်ပျော်ရွှင်မှုဆီသို့ ဦး တည်သည့်ပြောင်းလဲမှုလမ်းကြောင်းကိုစတင်နိူင်သည်။
ယခင်ဆောင်းပါးဖက်ရှင် BLOGGER? Chiara Ferragni သာမကဘဲ ဤတွင်အခြားအကျော်ကြားဆုံးမျက်နှာများ
နောက်ဆောင်းပါးဦး ထုပ်…ရိုးရိုးဆက်စပ်ပစ္စည်းလော၊ ကြည့်ရှုရာ၏ဗဟိုလား။ !
ကျွန်ုပ်တို့သည် ပို၍နားထောင်ရန် လိုအပ်သော်လည်း အမှန်တကယ်နှင့် လူတိုင်း၊
မတူညီသောချောင်းများဖြင့် တိုင်းတာသောအခါ အလေးနှစ်ခုနှင့် အတိုင်းအတာနှစ်ခု
အဆိုပါ narcissist ၏မျက်စိ, မကောင်းသောအကြည့်